China KAWASAKI Robot Brick Stacking ngwaahịa na ndị na-ebu ya | Onye na-eme brik
Dị ka mmepe nke oge, itinye robot etinyewo aka n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na mgbanwe ya, ntụkwasị obi ya, ịdị mfe ya, nke ọtụtụ ndị nrụpụta & ụlọ ọrụ kwadoro.
Ndọtị brik Robot nwere uru nke mgbanwe, arụmọrụ, nkwụsi ike na ikike dị elu. PLC na-achịkwa njikwa mfe maka ịrụ ọrụ. Rụ ọrụ na-arụ ọrụ na nlekọta ala.
a) Nnukwu ebe mmegharị na ike itinye ikike
Ọ nwere ike dakọtara na ọrụ palletizing dị n'etiti 1800 mm n'akụkụ aka ekpe na aka nri, 1600 mm n'ihu na azụ azụ, na 2200 mm na ụzọ elu na ala. E tinyela ụdị 180kg, 300kg, 500kg na 700kg na ụdị ndị gara aga nwere ibu dị 130kg na 250kg. N'ihi mgbakwunye nke ụdị ọhụrụ, ọ ka adịrị mfe ịhọrọ rọbọt kwesịrị ekwesị maka arụmọrụ palletizing.
b) Ike njikwa ikike
Ike njikwa kachasị ọsọ nke oge 2050 / H na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike izute ihe chọrọ nke njikwa ọsọ ọsọ ma nweta nzube nke mkpụmkpụ oge ọrụ. Mgbe ị wụnye gripper kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ngwa ọrụ, a na-ahọrọ robot nwere ibu ọrụ kwekọrọ, nke na-eme ka ikike mmepụta nke njikwa akara.
c) Simple palletizing software K-SPARC (nhọrọ)
Ghọta na mmemme mmemme nwere ike ịme ngwa ngwa site na ịhọrọ ngwaọrụ, pallets, na usoro palletizing na kọmputa. Nwere ike hazie ma gbanwee nhazi na ihuenyo sọftụwia ma kọwaa ọrụ nke robot. N'iji ya tụnyere ngwanrọ palletizing gara aga, ịgbakwunye usoro palletizing adịla mfe, ọrụ izi ihe adịkwuola mfe.
Nke gara aga: YASKAWA Robot Brick Stacking
Osote: Ugboro abụọ aro inggwakọta Extruder